Sawiro taxan: Gudniinka xubinta taranka ee dumarka – xalaaleynta xubinta taranka - Youmo
Bildspel: Omskärelse av snippan - könsstympning - somaliska
Sidee ayay u eekaan kartaa?
Waxa gudniinka loo sameeyaa siyaabo badan. Marmarka qaarkood ayaa qaybaha dibadda ee xubinta taranka dumarka waxyeelo loo geystey, ama qeybo ka mid ah ayaa laga gooyey. Marmarka qaarkood ayaan gudniinka la arki karin. Halkan waxaad ka arki kartaa dhowr tusaale oo sida uu u eekaan karro ah:
Sidan ayay xubinta taranka dumarka ee aan la gudin u eekaan kartaa.
Halkan ayaa caaradda kintirka iyo maqaarka ku wareegan kintirka laga gooyey.
Halkan ayaa caaradda kintirka iyo maqaarka ku wareegsan kintirka laga gooyey. Bushimaha gudaha ku yaala ayaa sidoo kale la gooyey.
Halkan ayaa caaradda kintirka iyo bushimaha laga gooyay. Xubinta taranka ee dumarka ayaa la isku tolay. Waxa jira furitaan yar oo kaadida iyo caadada dhiigu ka soo bixi karaan.
Waxaad wali ku raaxeysan kartaa galmada
Nooca ay doonto xubintaada taranka ee dumarka ha u eekaatee, waxaad wali dareemi/rabi kartaa oo aad ku raaxeysan kartaa galmada, adiga kalidaa iyo dadka kale aad la sameyso labadaba.
Qeybta ugu weyn ee kintirku waxay ku hadhsan tahay gudaha jirka xataa haddii guudka sare/caaradda korre la gooyey/ Kintirka oo dhan waa mid dareen ahaan galmada u nugul.
Waxa jira meelo kale oo badan oo jirka ku yaala oo raaxo laga dareemo karro.
Waxay biyahu kaa iman karaan xataa haddii lagu gudey.
Waxa dhibaato kuu keeni kara gudniinka!
Dadka qaar loo sameeyey gudniinka xubinta taranka dumarka ayaan wax dhibaato ahba dareemin. Halkan waxa ku yaala dhowr dhibaatooyin ah oo aad heli karto:
Waxa kugu adkaan karta kaadida. Waxay qaadan kartaa wakhti dheer ama waa ay ku xanuujin kartaa. Waxaad marar badan heli kartaa cudurka infegshanka kaadida.
Waxa ku xanuujin karra caadada haddii aanay si fudud kaaga soo dareerin. Waxaad heli kartaa xanuun badan caadadu markey kaa imaaneyso.
Waxay ku xanuuni kartaa marka aad galmo sameynayso. Waxa kugu adkaan karta inaad sida aad rabto galmo ugu sameyso.
Siilka ayaa ku xanuuni karra. Waxaad heli kartaa nabaro iyo finan/fiixo xanuun leh.
Waxa jirta caawino wanaagsan
Waxaad aadi kartaa ungdomsmottagning (ungdomsmottagning waa xarunta qaabilaada caafimaadka ee dhalinyarada) ama vårdcentral (vårdcentral waa qaabilaadda kugu dhow markaad u baahato inaad la kulanto dhakhtar ama kalkaaliso) haddii ay dhibaato kaa haysato gudniinka. Waxaad kala hadli kartaa kalkaalisada dugsiga haddii aad dugsiga dhigato. AMEL-mottagningen oo ku taala Stockholm ayaa dad badan oo dhibaato ka soo gaarto gudniinka caawisa. Waxaad halkaas aadi kartaa meesha aad doontaba aad ka deganaatid wadankee. Caawimada aad heli karto:
Kalkaaliso ama dhakhtar ayaa eegi karra haddii lagu guday iyo haddii kale. Waxa laga yaabaa inaanad adigu taas hubin.
Waxa suurtogal ah in qaliin loo sameeyo siil la isku tolay, si markale dib loogu furo. Marmarka qaarkood ayaa taas loo baahan yahay, haddii aad galmo sameynayso ama aad ilme umuleyso.
Waxaad caawimo ka heli kartaa in nabarada iyo fiixaha lagaa gooyo haddii ay ku xanuuneyaan.
Waxaad la hadli kartaa qof haddii aad wax xun dareemeyso, tusaale ahaan inaad xasuusaneyso gudniinka.
Shaqaalaha waxa qabanaaya xeerka sir haynta iyagoo aan u sheegi karin cid kale haddii aad caawimo daryeel ah lagu siiyey.
Waa sharci darro in qof la guddo
Waa adiga ikhtiyaarkaaga haddii aad rabto inaad qof u sheegto in xubintaada taranka ee dumarka la guday. Waa adiga ikhtiyaarkaaga haddii aad rabto inaad tusto sida ay u eegtahay. Ma aha wax dambi ah inaad gudan tahay.
Laakiin waa sharci darro in qof la guddo. Qofka isagu qorsheynaaya, qof kale ka dalbanaaya ama isaga laftiisu sameynaaya gudniin ayaa sharciga ku xadgudbaaya. Tani waxay xataa khuseysaa haddii aad tagto wadan kale si aad ugu soo sameyso gudniinka.
Ma waxaad ka welwelsan tahay in qof la guddi doono? La soo xiriir adeega bulshada ama Booliiska. Waxa aad la hadli kartaa kalkaalisada dugsiga joogta ama qof weyn oo kale oo aad ku kalsoon tahay.
RFSU: Gudniinka xubinta taranka
KroppenSu’aal: Waxa la igu sameeyey gudniinka xubnaha taranka, sidee ayaa la ii caawin karaa?